Dilkii la daboolay ee Benazir Bhutto | Berberanews.com
Home Qubanaha Dilkii la daboolay ee Benazir Bhutto
adminDec 28, 2017Qubanaha, WARARKA
Markii la dilayay waxa ay isku dayaysay in ay markii seddexaad qabato xilka ugu sareeya dalka, balse dilkeeda ayaa waxa uu horseeday kacdoon dadweyne oo aad u balaadhan.
Tuma ayay ahayd Benazir Bhutto ?
Waxa ay ahayd shaqsiyad haraysay saaxadda siyaasadda Pakistan muddo dheer, labo jeer ayay Ra’isulwasaare noqotay, waxayna kala ahaayeen 1988 illaa 1990-kii, iyo markale oo ahayd intii u dhaxaysay 1993-dii illaa 1996-dii.
Waxa ay ahayd gabadh da’ yar oo jalaqsan, quruxna badan, taas oo isu soo muujisay in ay tahay qofka ay dadka ku badalan karaan siyaasadda ay raggu horboodayaan.
Balse markii labaad oo ay xilka ka dhacday, ayaa waxaa aad loola xiriiriyay musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waxa ay Pakistan ka tagtay sanadkii 1999-kii , iyada oo kusoo laabatay bishii Oktoobar, 2007-dii kadib markii madaxweynihii Pakistan Musharaf uu iyada iyo dad kalaba siiyay damaanad ah in aanan lagu soo oogi doonin dacwado la xiriira musuqmaasuq.
Waxa ay qorsheyneysay in ay ka qeybqaadato doorashooyinkii dhici lahaa 2008-dii, balse xafladdii soo dhaweynteeda ee magaalada Karachi ayaa waxaa qarxiyay Taliban, waana ay ka badbaaday markaas. Waxaana markaas dhintay illaa 150 qof, balse waxaa la dili doonaa labo bilood kadib.
Ninkeeda ayaa madaxweyne noqday
Dalka Pakistan waa wax iska caadi ah in aad maqasho dadka oo ka hadlaya in ninkeeda Asif Zardari uu ka dambeeyay dilka Bhutto, waxaana taas lagu saleeyay xaqiiqda ah in uu isaga noqday qofka ugu badan ee ka faa’iiday dilkeeda.
Balse dadka fikraddan aan la hubin faafinaya ma aysan soo bandhigin hal arrin oo caddeyn u noqon kara in Asif uu ka dambeeyay dilka xaaskiisa. Isaga aad ayuu u beeniyay in uu wax lug ah ku lahaa dilka.
Asif Zardari ayaase wajahaya eedeymo kale oo ah in inkasta oo uu noqday madaxweyne, islamarkaasna lahaa awoodaha oo dhan, in uu ku guuldaraystay in uu si fiican u baaro dilka xaaskiisa.
Waraaqo sir ah oo ay heshay BBC-da oo ku saabsan baaritaankii booliiska ee dilka ayaa muujinaya sida foosha xun ee loo maamulay baaritaanka, taas oo xiraa muujinaysay in booliiska aysan doonaynin in ay helaan dadkii dilka ka dambeeyay oo aan ka ahayn dadka darajadoodu hoosayso ee lasoo adeegsaday ee xabsiga lagu hayay.
Waxyaabaha farta lagu fiiqay ayaa waxaa ka mid ah in dadkii isku qarxiyay Bhutto 18-kii Oktoobar, 2007-dii, qaraxaas oo ay ku dhinteen 150 qof, in aanan illaa iyo hadda la aqoonsanin kuwa ay ahaayeen dadkii qaraxyada geystay.
Tusaale ahaan madaxa guddiga baaritaanka dilka Bhutto Saud Mirza ayaa sheegay in uu aqoonsaday in mid ka mid ah dadkii isku qarxiyay Bhutto magaalada Karachi, in uu kasoo jeeday qowmiyad yar oo magaalada Karachi degan oo asal ahaan kasoo jeedda Afrika.
Balse xogtaas waligeed bulshada looma soo bandhigin, halkii ayaana looga haray.
Zardari ayaa sheegay in uu xitaa ku guuleystay in Qaramada Midoobay usoo magacoowdo guddi baara dilka Bhutto, balse guddiga waxa ay sheegeen in shaqadooda ay hor istaageen wasiiro ka tirsanaa dowladda Zardari.
“Waxaa jiray dad badan oo dowladda ka tirsan oo aan rabnay in aan waraysano, balse waa ay diideen” ayuu yiri Heraldo Munoz oo madax ka ahaa guddiga Qaramada Midoobay ee baaritaanka dilka Bhutto. Waxa uu intaas ku daray in xitaa gurigii ay joogeen guddiga ay dowladda ka qaaday illaaladii waardiyaha ka hayay.
In wax la daboolayay waa arrin iska cad oo aanan shaki ku jirin. Baaritaan ay samaysay BBC-da ayaa lagu ogaaday in labo nin oo ka caawiyay Bilaal in uu gaaro halkii ay Bhutto ku sugnayd si uu u dilo, in iyagii ciidanka militariga ay dileen 15kii bishii Janaayo,2008-dii.
Sargaal sare oo ka tirsan dowladdii Zardari ayaa arrintan ku micneeyay in uu ahaa ‘iska hor imaad’, taas oo ah ereybixin ay dowladda u isticmaasho marka ay dhacaan dilalka aanan caddaalada loo marin.
Labadan nin waxa ay kala ahaayeen Nadir iyo Nasrullah Khan oo arday ka ahaa mandaraso Talibaanka lala xiriiriyo oo lagu magacaabo Xaqaani. Sidoo kale ardaydii kale ee wax ka ogaa dilka dhammaantood waa ay dhinteen.
Dadka lugta ku lahaa ee la dilay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan oo isaga sameeyay bomka Bhutto lagu dilay, iyo Cabdullaahi oo isaga safriyay bomka, sida ku cad warbixin ay BBC-da heshay oo loo gudbiyay baarlamaanka gobolka Sindh ee Pakistan.
Qofkii kale ee la dilay waxa uu ahaa dacwad oogihii qaranka Chaudhary Zulfikar, kaas oo ahaa garyaqaan caan ah oo matalay dacwado badan oo dad darajo sare ay ku eedeysnaayeen.
Waxa uu saaxiibadiis u sheegay in uu horumar wanaagsan ka sameeynayo baaritaanka uu ku hayay dilka Bhutto.
3-dii bishii May, 2013-kii ayaa lagu dilay mid ka mid ah dariiqyada magaalada Islamabad xili uu kusii jeeday dhagaysiga dacwadda Bhutto.
Ninkii loo maleynayay in uu dhintay oo nool
Waxaa jira nin markii hore la sheegay in uu dhintay, balse dib ay kasoo baxday in uu noolyahay.
Dadka loo qabtay dilka Bhutto waxa ay sheegeen in uu jiray nin la socda Bilaal oo isna bambaano ku xirnayd, kaas oo lagu magacaabo Ikramullaah.
Muddo sanooyin ah ciidammada sirdoonka Pakistan waxa ay ku adkaysan jireen in Ikramullaah lagu dilay weerar xagga cirka ah oo dhacay .
Balse liis ay bishii Agoosto soo saartay dowladda oo ah dadka loogu doondoonista badanyahay oo ka kooban 28 bog, ayuu Ikramullaah ku jiraa nambarka 9aad ee liiska.
BBC-da waxa ay ogaatay in Ikraamullaah uu ku noolyahay dalka Afghanistaan, halkaas oo uu ka yahay taliye darajo dhexe leh oo ka tirsan Talibaan.
Dadka kaliya ee loo ciqaabay dilka Benazir Bhutto ayaa ah labo sargaal oo booliiska ah oo iyagu amray in goobtii lagu dilay Bhutto la dhaqo ka hor intii aanan laga qaadin wixii caddaymo ahaa ee meesha yiilay.
Dad badan ayaa aaminsan in xukunka ku dhacay uu yahay mid xaq darro ah, waxayna ku doodayaan in booliiska aysan meesha nadiifin lahayn haddii aysan markaas amar iyo ogolaansho ka haysanin militariga.
Markale arrintan waxa ay muujinaysaa in ay jirto wax daboolis weyn oo ay ku lug leeyihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga iyo kuwa hore oo hawlgab ah, kuwaas oo iyagu sheega in ay u adeegayaan wax ay ugu yeereen danaha qaranka Pakistan.
Previous PostSomaliland oo ka digtay maamulkii Hawada Somalia ee lagu wareejiyay Maamulka Muqisho Next Post“Heshiiskii Saldhiga Milateri Marnaba Kama Noqon Karto Xukuumada Madaxwayne Muuse Biixi”..Safiir Baashe Cawil